Ukubalwa izitebhisi kanye besandla ezintathu
Ukubalwa izitebhisi kanye amatheku amathathu kanye level emhlabathini
degree A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
degree B 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
degree C 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
A - Inani izinyathelo phezulu string
B - Inani izinyathelo in the bowstring phakathi
C - titepisi in the bowstring aphansi
SP - Thola isikhundla esigabeni sokuqala maqondana phansi esitezi sesibili.
In the isikhundla sokuqala esigabeni eliphezulu isendaweni ezingeni phansi esitezi sesibili.
In the floor of the floor yesibili kuyisinyathelo lokugcina. Ukuphakama isitebhisi kuyehla kulingana
Uhlelo sinquma ngokuzenzakalelayo ukuphakama nobubanzi izinyathelo, engela ubukhulu phezulu, maphakathi kanye phansi string.
Ngokuba ukukhethwa elilungile lula izitebhisi ukushintsha inombolo izigaba.
Ungakwazi ukukhiqiza umdwebo black-and-white noma umbala.